Hollywood tarayn Mirror la hoggaamiyo nalalka, Miiska Dushiisa ama Wall Fardoolayda dhalaalka hagaajin karo
★ tarayn Mirror la Lights: 15pcs LEDka nalalka ay hogaaminayaan, 2pcs bedelka dheeraad ah keentay nalalka, dabeecadda iyo nalalka dhalaalaya, iftiin cad hagaajin ama Kulaashaan iftiin huruud
★ Miiska Dushiisa ama Wall Fardoolayda: design soo jiidasho leh, top miiska ama derbiga Buur rakibi way.you dooran kartaa mid ka mid ah sida aad si fiican u jeceshahay.
★ hagaajin lighting.Smart dhalaalka gacanta ku taabto nalalka, dayliht cad (6500k) / light diiran jaalaha ah (3200k) dhalaalka .Adjustable iyo aad u hesho wax aan waxba tarayn a qurxiyo kaamilka.
★ Base Wooden la Aluminum jir daawaha, mirror.a qurxiyo hadiyad kaamil ah classical iyo professinal shiday gabar iyo hooyaday.
Midabada Available: lacag ah, oo cad
BEAUTME- dhegaysta Si taxaddar leh u dhigi faahfaahin kasta ee alaabta
jir ah laga sameeyo daawaha aluminium oo tayo sare leh iyo habka lagu buufiyo adag oo fiican ayaa diiday, raad tola on jir ah, si ay u abuuraan jir kaamil ah, oo fiiriyaa dheeraad ah fasalka sare ah oo qurux badan.
Miiska Dushiisa / Darbiga Jaha MIRROR
rofessional tarayn Mirror la Lights dooran xiritaanka light in iftiinka maalinta, si fiican u garanaa heerka uu hadh. Ka samaysan loox aluminium tayo sare leh,, birta safeexado adag oo la dahaadhey xoog leh oo saldhig u ogalaan in uu sii joogo adag oo miiska saaran. Dhalaalaya jir splicing aan xuduud lahayn ka dhigaysa muraayada dheeraad ah fasalka sare ah oo qurux badan.
15pcs LEDka nalalka keentay, si looga usded waayo, qurxinta, nadiifinta xiiray, Dharka iyo qallaji Your nalalka diiran Hair.Yellow iyo maalintii laga beddeli karaa sida aad loogu baahan yahay, oo quruxdaadiina had iyo jeer ku hay.
Qurxiyo Mirror la Lights
Perfect shiday tarayn Mirror waayo, waxaad ka
Professional tarayn Mirror la Lights dooran xiritaanka light in iftiinka maalinta, si fiican u garanaa heerka uu hadh. Ka samaysan loox aluminium tayo sare leh,, birta safeexado adag oo la dahaadhey xoog leh oo saldhig u ogalaan in uu sii joogo adag oo miiska saaran. Dhalaalaya jir splicing aan xuduud lahayn ka dhigaysa muraayada dheeraad ah fasalka sare ah oo qurux badan.
Miiska Dushiisa / Wall Fardoolayda Mirror la Lights:
LED Light nalalka
Save korontada, fashion iyo ilaalinta deegaanka.
Aluminum Meegaarka / Base Wooden
Aluminum jir oo saldhig ka samaysan alwaax, marar badan nidaamka shiidi doona, ka dhigi muraayada more raagaya iyo qurux
1. Touch khafiif ah in ay soo jeedin on / demi light / maalintii nuurka diiran.
2. Qabasho dheer taabto si ay ula qabsadaan dhalaalka iftiiminta.
Previous: Sminke wax aan waxba tarayn Tabletops shiday Mirror Iyadoo 9 Caagga LED Lights Touch Screen Stage Beauty Mirror
Next: Sminke Hollywood tarayn Mirror Miiska Dushiisa ama Wall Fardoolayda
LED nalalka midabka, iftiin huruud diiran (3200k) & maalin iftiin cad (6500k);
Jire Waxyaabaha: Aviation - aluminium fasalka, saldhig ka samaysan alwaax
Power: DC5V / 2A koronto-in (110-240V)
size Glass: 389mm (L) * 489mm (H) / (15.31 "* 19,25");
Product aragti: 420mm (L) * 100mm (W) 512mm * (H) (16.5 "* 3,94" * 20,156 ");
ka dhigaysa faraxsan naagtii
Waxaan iibsaday muraayad this for aniga iyo xaaskeyga. iyada waxaa si joogto ah dacwoonayso samaynaya iyada qurxiyo in our musqusha leh iftiiminta ahaa mid aad u jilicsan. iyadu in on shelf ee kor ku xusan our qubeyska si iyadu ma ay leeyihiin in ay u guuraan iyada qurxiyo taagay oo aad ugu faraxsan yahay. halkan waa sawiro qaar ka mid ah Mudanayaasha laakiin ha xaaskeyga ma sheegi waxaan iyagii kaxeeyey. iyada lagu quruxsan murugoodo lahaa iyada meesha aan ahaa Instagram diyaar. Waxaan jeclaan lahaa inaan sidoo kale u eg in aad ku darto, Ma dhihi karo waa safar-friendly si kastaba ha ahaatee iyadu dhibaato ah ma waxay u dhaqaaqo qolka fadhiga in ay sameeyaan iyada qurxiyo iyo watch TV markii layga qaato musqusha.
Hollywood Style shiday Miiska Dushiisa sminke Mirror, ...
Hollywood shiday tarayn Mirror la LED UV iyo macallimiinta ...
Qurxiyo Mirror Iyadoo Light nalalka, waxba tarayn Light nalalka , Wax aan waxba tarayn Mirror Iyadoo Light nalalka, Mirror Iyadoo Light nalalka ,